အိပ်မက်မက်ခြင်း၊အသားလှုပ်ခြင်း၊နိမိတ်ကောင်းမကောင်း | bbbbb
ဤ၀က်ဆိုက်အတွင်း ရေးသားထားသော စာပေများသည် ဗေဒင်ပညာရပ် ၊ ဂမ္ဘီရ ပညာရပ်များကို အခြေခံ၍ ရေးသားထားသော စာပေများ ဖြစ်သောကြောင့် ထပ်ဆင့် ကူးယူပြီး တခြားနေရာမှာ ဖော်ပြချင်သူများ အနေနှင့် စာရဲ့အောက်ဆုံး နေရာမှာ “ ဆရာ ဟိန်းတင့်ဇော် ” နှင့် “ http://www.heintinzaw.com/ ” ဆိုတာလေး ကိုတော့ ထည့်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ပို့အားလုံးခေါင်းစဉ်များ -မိသားစုယတြာများ (1) ၀န်ထမ်းရေးရာယတြာများ (1) ၀ိဇ္ဇာလမ်းနှင့်ပါတ်သက်၍ (2) ကမ္ဘာကျော်စိတ်တန်ခိုးရှင်များ (6) ကံမြင့်ကံကောင်းစေသောယတြာများ (1) ကိုယ်တိုင်ရေး လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ် (1) ကျင့်ယူ၍ရသောပညာရပ်များ (15) ကျန်းမာရေးယတြာများ (16) ဂဏန်းဗေဒင် (34) စာဖတ်ခန်း (3) စာကြည့်တိုက်သို့ (1) စာရေးခြင်းအတတ်ပညာ (4) စိတ်တန်ခိုးကျင့်စဉ် (41) စီးပွားရေးတိုးတက်စေရာယတြာများ (79) ဆက်သွယ်ရန် (1) ဆရာမနှင်းအိမ်ဝေ၏ဘလော့ပို့များ (2) တစ်ပါတ်စာကံကြမ္မာဟောစာတမ်း (1) တစ်လစာကံကြမ္မာဟောစာတမ်း (1) တားရော့ပညာ (73) တိုတိုထွာထွာအမေးအဖြေများ(မေး၍ဖြေသည်) (1) ဒီနှစ်-သင်၏ကံကြမ္မာ (6) ဓာတ်ပုံများ (4) န၀ရတ်လက်စွပ်စီရင်နည်း (1) နည်းပညာ (2) ပညာရေးယတြာများ (5) ပို့အားလုံး ခေါင်းစဉ်များသာ (2) ပုတီးမိတ်ဆွေများအတွက် (2) ပုံတော်များ (4) ဗွီဒီယို (4) ဗဟုသုတ (1) မင်းသိင်္ခ၏ ဓနသိဒ္ဓိ ကျင့်စဉ် (14) မင်းသိင်္ခ၏၀တ္ထုတိုများ (3) မင်းသိင်္ခ၏ယတြာများ (8) မျှဝေခြင်း (5) မိသားစုယတြာများ (65) ယတြာအဆောင်ပြုလုပ်နည်းများ (9) မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်ပညာ (26) ရင်သို့ထိသော စကားလုံးများ (14) ရန်အန္တရာယ်ကင်းယတြာများ (16) လက္ခဏာ (28) သင့်ဘ၀အဖော်မွန်အကြောင်း (16) ဟာသ (1) အခါတော်ပေးပြက္ခဒိန် (1) အခါရွေးချယ်ခြင်း (16) အချစ်ရေးယတြာများ (43) အင်းစမတော်များ (6) အင်းဖယောင်းတိုင်စီရင်ပုံ (1) အဓိဋ္ဌာန် (43) အဘမင်းသိင်္ခ၏အဆောင်များ (24) အဘမင်းသိင်္ခ၏အဆောင်ယတြာများ (36) အဘမင်းသိင်္ခအလွမ်းပြေ (39) အမှတ်တရပုံရိပ်များ (2) အလုပ်ကိစ္စယတြာများ (20) အထွေထွေယတြာများ (18) အနုပညာနှင့်ပါတ်သက်သော (4) ငွေကြေးဆိုင်ရာယတြာများ (31) ထွေရာလေးပါး (1) ဒေါက်တာမင်းသိင်္ခဆိုတာ.... (3) ကြော်ငြာ (1) ဗေဒင်ဝါသနာရှင်များအတွက် (2) ဗေဒင်မေးမယ် (1) ပြောချင်တာလေးတွေ (1) ရောင်းရေး-၀ယ်တာ (50) နှလုံးပီတိ-ဂွမ်းဆီထိသို့ (1) နိုင်ငံရပ်ခြားယတြာများ (12)
ဒီနှစ် ကံဇာတာကောင်းအောင် ယတြာချေမယ်
မင်းသမီး၊မင်းသား အနုပညာသမားများအတွက် အဆောင်
တစ်ပိုင်းတစ်စ ဖြစ်နေသော အလုပ်များ ပြီးပြတ်စေရန်
အပြောအဆို လွတ်ကင်း ၀ိမုတ္တိအင်း
အကြားအမြင် ပါရမီရှင် ကရာဇက်
ရန်နှင့်အတိုက်အခံများ ပျောက်လွင့်စေသော အဆောင်
ကျွန်တော် ဒီနေရာလေးကနေပြီး အမေးအဖြေ ကဏ္ဍလေး တစ်ခု စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ ဘာအတွက်လည်း ဆိုတော့ မေးခွန်းသေးသေးလေးတွေ အတွက်ပါ။ ဥပမာ ညတုန်းက အိပ်မက်တစ်ခုမက်တယ် ဆိုကြပါစို့။ အဲဒီ အိပ်မက်ကောင်းမကောင်း အကျိုးအပြစ်ရှိမရှိ ဆိုတာလေးတွေရယ်၊ ညတုန်းက အိပ်မက်မက်တာ ကောင်းမကောင်း ဆိုတာလေးတွေကို ဒီနေရာလေးကနေ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပြီး ဖြေပေးပါ့မယ်။
နောက်ပြီး အသားလှုပ်နိမိတ် နဲပါတ်သက်တာတွေကိုလည်း နိမိတ် ကောင်းမကောင်း အကျိုးအပြစ် ကောင်းမကောင်း စတာတွေကို ဒီနေရာလေးကနေ ကြိုးစားပြီး ဖြေပေးသွားပါ့မယ်။ အဲဒီလို ဖြေတဲ့နေရာမှာ အိပ်မက်တိတ္တုံ ကျမ်းနဲ့ အသားလှုပ်ကျမ်း အလိုအရ ဖြေပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးကို အထူး မေတ္တာရပ်ခံချင်တာကတော့ ဒီနေရာလေးကနေ မည်သူ့ကိုမျှ ဗေဒင် တွက်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗေဒင်ကို အသေးစိပ် ကျကျနန မေးချင်တယ်။ တွက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဗေဒင်မေးမယ်ဆိုတဲ့ နေရာလေးကနေ မေးဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒီနေရာလေးမှာ မေးဖို့အတွက် မည့်သည့် မွေးသက္ကရာဇ်မှ မလိုအပ်ပါဘူး။ နာမည်ရယ် ကိုယ်မေးချင်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေကို ရေးထားလိုက်ရင် အလျဉ်းသင့်သလို ၀င်ဝင်ပြီး ဖြေပေးသွားပါ့မယ်။
Posted by sayaheintintzaw sayaheintintzaw at 1:12 AM
ဟိန်းတင့်ဇော်(ဗလာ) August 24, 2011 at 8:43 AM
ကဲ..... အားလုံးကို လှိုက်လှဲနွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
Nyo Min Lwin February 24, 2013 at 11:22 PM
အသားလှုပ်တာပါ ဘယ်ဘက်ဒူးဆစ်အပေါ် ပေါင်အတွင်းပိုင်က လှုပ်နေတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ သိချင်ပါတယ်
Ma February 20, 2014 at 7:46 PM
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ကျမ အနေနဲ့တော့ဒီစာလက်ယာဘက်မှာရှိနေတဲ့ ဓမ္မတွေကို ဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
IRD Department August 17, 2017 at 3:51 AM
ညာဘက် လက်မောင်း အတွင်းသား လှူပ် ခြင်းကို သိချင်ပါတယ်
ကိုယ်တိုင်ရေး လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ် (1)
ပို့အားလုံး ခေါင်းစဉ်များသာ (2)
မင်းသိင်္ခ၏ ဓနသိဒ္ဓိ ကျင့်စဉ် (14)
ရင်သို့ထိသော စကားလုံးများ (14)
စေတီပုထိုးများ Pagoda စေတီပုထိုးများ
စုပေါင်း ရဟန်းခံ စုပေါင်း ရဟန်းခံ
ဦးဝီရသူ (မစိုးရိမ ဦးဝီရသူ (မစိုးရိမ်)
သမိုင်း (မှတ်တမ်းမ ထေရုပတ္တိ၊ ဈာပန
Bamaw Sayardaw Bamaw Sayardaw
၀ံသာနု WonTharNu ၀ံသာနု WunTharNu
BOOKS BOOKS PDF
Dhamma Photo Slideshow ဓမ္မဓါတ်ပုံများ slideshow
Dhamma Song Dhamma Song
Moe Nyein Sayardaw မိုးညှင်းဆရာတော်
မိုးညှင်း Pilot အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ
ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်� ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ဂါ
မေတ္တာရှင် ရွှေပြည် ဦးဇဝန
Dhamma Song ဓမ္မပူဇာတေးများ
More Monk More Category
သဲအင်းဂူ Ch3သဲအင်းဂူ
မိုးကုတ် Ch-2 ဘဒ္ဒန္တဝိမလမဟာထေရ်
ပါမောက္ခချုပ် Ch-5 ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ
ဗန်းမော်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ
သီတဂူဆရာတော် Ch-11 သီတဂူဆရာတော် ဦးဉာဏိဿရ
ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင် Ch-1 ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင်
အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်း Ch-9 အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်း
ဒယ်အိုး Ch-8 ဦးသုမင်္ဂလ
မေတ္တာရှင် Ch-7 ရွှေပြည်သာ
ဦးဃောသိတ Ch-6 ဦးဃောသိတ
Theravada Rector Ch-4 Dr.Nandamalabhivansa
Dr.Min Tin Mon Ch-10 ဒေါက်တာမင်းတင့်မွန်
မိဘမေတ္တာ ဖော်ကျူး Ch-12 မိဘမေတ္တာ တရားတော်များ
10 Dhamma Radio Ten Channels
Dhamma Song Channel ဓမ္မပူဇာတေးများ
Current Listeners Radio Stats
Android Phone Version Mobile Phone (Android)
dhamma.tv All in One All in One TV+Radio
Random Video Random Video +++
Dhamma Song TV Channel Dhamma Song TV Channel
10 Dhamma TV Ten Channels
အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်) ရွှေပြည်သာ
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရ� ၀န၀ါသီ ဉေယျဓမ္မသာမိထေရ်
ပန်းချီ ဦးဘကြည် ပန်းချီ ဦးဘကြည်
အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သဒ္ဓမ္မကိတ္တိသာရ
သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ မြန်မာကျူးပစ် ဖိုရမ်
Dhamma Quiz ဓမ္မဥာဏ်စမ်း
၅၅၀ ဇာတ်တော်များ ၅၅၀ ဇာတ်တော်များ
ဗန်းမော်ဆရာတော်ြ� ဒါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ
ပုံတော်များ High Resolution
360 Degree Photo Panorama 360 Degree Photo
သြဝါဒ ဆောင်ပုဒ် သြဝါဒ ဆောင်ပုဒ်
Widgets Random Video +++
Dhamma Library Library Under Construction
Toolbar TV+Radio+more Dhamma Toolbar
မြန်မာ ပြက္ခဒိန် Myanmar Calendar
Free Video Code Gen Embed Code Generator
Edit Personal Info Ur facebook/Twitter/Youtube
Edit Photo/Name Change Profile photo/avator
Message Check Message
Create Playlist Create Playlist
Member's Favorites Member's Favorites
Other Member's Playlist Enjoy Other's Playlist Collection
Change Password Edit Password
Upload Dhamma Photo Edit your Own Dhamma Album
Upload Video, Books & MP3 Upload Video, Pdf & Mp3
Edit Media Edit Uploaded Media
Member Home Member Home
Private/Public Profile Hide or Show Profile
သင့်ဝက်ဆိုဒ် Link ချ� Submit Link
Send Message to admin Send Message to admin
Site Content ဤ၀က်ဆိုဒ်၏ မာတိကာ
ကျွန်တော် ဒီနေရာလေးကနေပြီး အမေးအဖြေ ကဏ္ဍလေး တစ်ခု စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ ဘာအတွက်လည်း ဆိုတော့ မေးခွန်းသေးသေးလေးတွေ အတွက်ပါ။ ဥပမာ ညတုန်းက အိပ်...
ကျွနုပ်၏ အသက် ရှစ်နှစ် ကိုးနှစ် အရွယ်ခန့်က ကျွန်ုပ်၏ အဘွားသည် ရေချိုးပြီးတိုင်း သနပ်ခါး လိမ်းရန် အတွက် ကျွန်ုပ်ကို သနပ်ခါး သွေးခိုင်း တတ်၏။ ...
ကျွန်ုပ်အား လာဘ်ရွှင်စေခဲ့သော ပစ္စည်းရောင်းနည်း(မင်းသိင်္ခ)
ကျွန်ုပ်သည် မြို့ထဲတွင် ဗေဒင်မဟောတော့ပဲ မိဘနေအိမ်၌ပင် ဗေဒင်ဟောပြောရလေ၏။ ကျွန်ုပ်၌ အလုပ်တစ်ခု လုပ်ရန်အတွက် ငွေအရင်းအနှီး လိုနေ၏။ ထိုအချိန်၌ ...
ဒီအင်းစမတော်ကိုတော့ ဣတ္ထိယသဘာဝ အစွမ်းပြသော စမတော် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုနေရာမှာ အသုံးပြုရသလဲဆိုတော့ အမျိုးသမီးများအတွက် သီးသန့် ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသ...
သောကြာသား သမီးများအတွက် နေ့စဉ် ကံကောင်း စေသော အချိန်များ
“ဗေဒင်ဟောပါ - သင်မပါစေနဲ့ဟု ဆရာသခင်က ဆုံးမခဲ့ဘူးသည်။ သို့သော်....” တစ်နေ့သ၌ ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်နေ၀စ်ရှိ ကျွန်ုပ်၏ ဗေဒင်လက္ခဏာ ဟောခန်းအတွ...
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ အယ်ဒီတာ မောင်မောင်မြင့်အေး ရောက်လာပြီး လျှင် ကျွန်ုပ်အား ဆရာရေ...။ အခုတလော အိမ်မှာ လာဘ်တိတ် သလိုပဲ...။ ပိုက်ဆံသ...
တစ်နေ့သ၌ မဟာချိုင် နေ၀စ်ရှိ ကျွန်ုပ်၏ ဗေဒင်လက္ခဏာ ဟောခန်းကလေးရှိရာသို့ အသက်အားဖြင့် (၂၄)နှစ် ခန့်ရှိသော ရုပ်ရည်ချောမောလှပသော အင်ကြင်းမေဟုအမည်...
အမှန်တကယ် အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေ သူများအတွက်
ကဲ.... အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေး အမှန်တကယ် အဆင်မပြေ ဖြစ်နေသူတွေအတွက် ဒီပို့လေးကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။ ဒီယတြာနည်းကို နှစ်နံတွဲ ပီယဓာတ်ဆင်နည်း လို့...
ဆရာရှင့် တက္ကစီကားသမားများအတွက် အောင်မြင်စေသောယတြာမှာ ပန်အိုးတစ်လုံးနှင့် ကားခေါင်းခန်းတွင် ဂန္ဓမာပန်းအိုးလေး တစ်လုံးကို အမြဲထိုးထားပါ။ အဲ့ဒီ ...
Copyright (c) 2011 bbbbb. Design by Northern Scotland Joinery